Siza Ukuthenga Izimoto Used ngu Ukwenza A Vin Inombolo Lookup
Siyakwamukela ku website yethu futhi siyabonga ngokuvakashela. Isayithi lethu imayelana konke on amasondo, ikakhulukazi, amasondo esinenjini! Sihlela on eninika ulwazi esingcono kakhulu izimoto kanye nezinsiza.
Omunye Thing ukuthi sizogxila kakhulu is ukuthenga izimoto esetshenziswa, ngabe kungcono imoto noma iloli, ngesithuthuthu, ATV noma RV nendlela engcono uzivikele. Pretty kakhulu zonke izinto ezifanayo ziyasebenza zonke izimoto ezibalwe ngenhla lapho uthenga imoto esetshenziswa, ngenkathi kanye RV sika kungase kube izinto ezimbalwa kakhudlwana udinga ukuhlola.
Kunezinyathelo eziningana kufanele uthathe ngokuthenga imoto noma iloli. Ingabe umsebenzi wakho wesikole ngokufunda imoto umthengi ukubuyekezwa kanye nemibiko imoto umthengi. Buza abantu nisebenza nabangane mayelana ezahlukene zezimoto. Buthani ulwazi gas ukusetshenziswa ukwakheka kanye imodeli unesithakazelo ukuthenga. Hlola izilinganiso ukuthembeka imoto ngayinye abale abantu costs.Most bazi ukuthi ukuthenga imoto esetshenziswa kufana kweqa idayisi. Nokho, kulandela izinyathelo a esetshenziswa imoto checklist ingenye yezindlela ezingcono kakhulu ukuba uzivikele, imali yakho futhi usize ukunciphisa izingozi.
Kukhona kweqembu izinto okufanele ahlolwe futhi bahlola a auto esetshenziswa ukuthi ucabangela ukuthenga. Bheka imoto phezu, ingabe kudingeka amathayi? Ingabe ubona amafutha amabala emhlabathini ngaphansi? Test ukushayela imoto, uma isicelo amabhuleki, akusho imoto ukudonsa nganxanye noma ezinye? Uma abawubheki lezi zinto futhi nabanye abaningi kungenza abiza i fortune ngokuphelele. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukucabangela kwakho esetshenziswa car lokuzodingidwa ukuthi ungakwazi ukukwenza wena ukuhlola umlando imoto.
Ukuthenga imoto pre-ephethwe noma iloli alihlukile ukuthi owathenga party yangasese noma imoto esetshenziswa elidayisa, ngaphandle iqiniso lokuthi ungase ukhokhele imoto evela elidayisa. Wabenza imoto ngokuvamile babe munye ochwepheshe yabo Sebenzisa esetshenziswa car checklist ukuzohlola ukuhlola izimoto ukuthi ngemali eshisiwe noma adayiswa e, bese anqume uma izimoto lingathengiswa ku lot yabo noma cha. Abanye izimoto ukuthi adayiswa e futhi okungenamsoco ephelele uzobe wadayiswa endalini, futhi abanye kuzobe kudayiswa phezu lot wabenza. Futhi Yebo, ngisho izimoto ukuthi babe nezindaba kanye nezinkinga mechanical kuzobe kudayiswa phezu eziningi elidayisa kanye ungase ube lowo ugcina ukuthenga omunye walabo izimoto ukuthi kunezinkinga. Buza nomthengisi ukukubonisa umbiko isimo imoto ukuthi baye preformed ku imoto, noma umbiko isimo imoto ukuthi baye uthenge for the imoto ucabangela ukuthenga.
Izimoto Used ukudayiswa azimele (ukudayiswa umnikazi) zinhle kakhulu abathengi ezingaba ngenxa umcabango wokuthi imoto ibilokhu kahle zinakekelwe ngumnikazi, futhi ukuthi bakwazi ukuthola uhlabene uma uyithenga ngqo kumnikazi kuqhathaniswa izimoto namaloli ukuthi kuthengiswa by esetshenziswa imoto dealerships. Abantu abathengisa imoto yabo bebodwa abanayo zonke izindleko ukuthi elidayisa ine. Lokhu kuvumela izimoto esetshenziswa ukuthi ukudayiswa by abanikazi kubiza lonke okuningi esingaphansi imoto efanayo ngesikhathi imoto esetshenziswa elidayisa.
Nakuba athenga umuntu yangasese kungaba kancane more okuyingozi. Udinga ukuba ngiwukhathalela noma cha odometer iye ukuganga. Futhi nge umthengisi yangasese kanye elidayisa udinga ukuba sikhathazeke yini noma cha imoto ibilokhu yingozi embi noma cha. Futhi umthengisi yangasese, ingabe ngempela umnikazi wemoto (is the nemoto eyebiwe)?
Enye yezinto ezinhle kakhulu ongakwenza ukuze uzivikele engenhla ukuya online futhi ukusesha imoto online. Lokhu kuzosiza uqaphele ukuba kungenzeka odometer ukunqanyulwa noma ukuxhunywa kwamapayipi, izingozi ezinkulu futhi uma imoto eyebiwe noma cha.
Futhi ekugcineni, into eyodwa kufanele wenze ngaphambi kokuthenga imoto acele uma ungaba imoto ngahlola by umakhenikha yakho. Sethemba wena ube umakhenikha owathembayo uyonika imoto omuhle once phezu khuza you of yimuphi izinkinga ezingase zivele.
Hlala ubukele indawo yethu njengoba kusakhiwa futhi sizobe njalo ubuyekeza wona futhi bakunike ulwazi oluyigugu.
Nasi ividiyo enkulu sathola ukuthi unikeza ulwazi oluyigugu for izinto funa uma uthenga imoto –